Nbili nke Ebumnuche-Ebugharị Mgbasa Ọha Mmadụ | Martech Zone
Fraịde, Septemba 5, 2014 Douglas Karr
You'll ga-ahụkarị m na ụfọdụ nnukwu arụmụka online na ihe ọ bụla metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okpukpe na ikeketeorie… niile red-ọkụ mkpọchi na ọtụtụ ndị na-ezere. Ọ bụ ya mere m ji nwee njirimara nke onwe ma mara ama gafee mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa naanị, soro ụdị ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ m, soro m… mana kpachara anya… ị ga-enweta m niile.
Ọ bụ ezie na abụ m onye na-enweghị isi ego, enwekwara m nnukwu obi. Ekwenyere m na anyị kwesịrị inyere ibe anyị aka ma ghara ịdabere na ọchịchị ndị na-adịghị arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ. Ekwenyere m n’ezie na ụzọ anyị si agbanwe ihe bụ site n’ibu ọrụ dịịrị anyị na inye aka bụrụ ihe na-eweta mgbanwe. Nke anyi gị n'ụlọnga na-enye oge, ego na ihe ndị ọzọ na-enye oge ọ bụghị naanị inyere ndị ọrụ ebere aka… kamakwa iji nyere ụlọ ọrụ na-enweghị ego aka ma nwee nkwa.
Ọ dịghịzi mma naanị ịnweta nsonye mgbasaozi. Ahịa 3.0 ga-emeri ndị ghọrọ ndị na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ha nwee nzube, ma mee nke a, CMO, CSO, CSR, na Ntọala ntọala ga-agbakọ iji weta akụkọ na-agakọ ọnụ na ndụ. Lelee Anyị Mbụ si infographic n'okpuru na ụfọdụ eziokwu siri ike eziokwu na-eme ka o doo anya ga-eme n'ọdịnihu nke uru bụ nzube, na ihe ndị kasị iconic ụdị nke ga-eme n'ọdịnihu ga-abụ ndị na-akwalite ndị kasị baa uru na-elekọta mmadụ mgbanwe. Simon Mainwaring
Ọ bụghị naanị ihe ziri ezi ime, ịbụ nzube-chụpụrụ na-aghọkwa ihe na-atụ anya nke ulo oru, na mkpali maka ndị ọrụ na àgwà ịzụ ahịa na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa. Ndị mmadụ chọrọ ka ego ha gaa na azụmaahịa nke maara gburugburu ebe obibi, na-emeso ndị ọrụ ha nke ọma, ma tinye oge na ume iji mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma.
Obi dị m ụtọ nzube ebumnuche na-aghọ usoro na-eto eto na isiokwu nke mkparịta ụka - edere m tupu oge ahụ banyere nkụda mmụọ m nwere mgbe ndị mmadụ na-akatọ akpata ahịa (anyị na ndị a tụlere ihe a ALS Ice ịwụ Ịma Aka… Ugh). Aga m agba ụlọ ọrụ ọ bụla ume ịkwalite mbọ ha na-agba iji nyere ndị gbara ha gburugburu aka - nke a na-egosi ihe kpatara ya!
Tags: akpataakpata ahịanzubeebumnuche ebumnuchenzube ebumnuche na-elekọta mmadụ ahịaebum n’ucheSimon Mainwaringụdị mmekọrịtaanyị mbụ
Sep 5, 2014 na 1:11 PM
Ezigbo mma, Douglas. N'ezie, nke a na-eme ọsọ ọsọ ma anyị niile kwesịrị ịdị njikere ịmakụ ya. Daalụ!
Sep 6, 2014 na 1: 21 AM
Nke a adighi etinye m itu anya karia ndi ahu bu ezi ihu na aku na uba ans ee i nyela ya ihe !!!
Nov 28, 2014 na 12:20 AM
Akwa Douglas. Nọmba ndị ị nyere n’isiokwu a na-ezi ihe. Enweela m isiokwu yiri nke a nke na-ekwu maka otu ebumnuche ahịa si gbalite nzube bụ naanị karịa ahịa ahịa dijitalụ. http://bit.ly/1yj272u